Geedi socodka ka-hortaga hurdo-Maxaa loo isticmaalaa annealing andualing
Hannaanka Caddaynta Qeexista
HLQ Induction waa hogamiyaha gudaha adeegyada kuleylinta soojiidashada Ciribtirka nuugista wuxuu awood u siinayaa xakamaynta saxda ah ee lagu kalsoonaan karo ee qalabka maaddada birta ah. Xakamaynta qabatinka waxaa badanaa loo isticmaalaa jilicsanaanta jilicsanaanta iyo yareynta culeyska fekerka, iyadoo laga helayo faa'iidooyin aad u badan hababka caadiga ah. Diidmada kuleylka ayaa awood u siineysa ka saarida kuleylka wasakhda inta lagu gudajiray xirashada dhalaalaysa. Xakamaynta soo-saarista ayaa badanaa loo isticmaalaa jilicsanaanta jilicsan iyo cadaadiska-yareynta cadaadiska waxayna siisaa faa'iidooyin aad u badan hababka caadiga ah.
Qaboojinta Afduubka waa daaweynta kuleylka birta ah oo maadada birta ah ay la kulanto heerkul sarreysa waqti dheer kadibna si tartiib ah u qaboojiso. Xayiraadda waxaa inta badan lagu gartaa isbeddelada qaab dhismeedka yar-yar ee keena taas oo ugu dambeyntii mas'uul ka ah beddelidda aaladaha farsamo ee maaddada. Ujeedada ugu dambeysa ee geeddi-socodkani waa in la yareeyo adkaanta biraha isla markaana la wanaajiyo ducshiisa.
Adeegyada soo gudbinta waxay si gaar ah u tixraacdaa hawsha keenista sheyga ilaa heerkeeda ugu jilicsan. Nidaamkayaga kuleylka ah wuxuu u jilciyaa birta laakiin ma ahan illaa iyo inta suurtogalka ah. Heerka cadhada waxay kuxirantahay sheyga, heerkulka ugu badan ee la gaadhay iyo dhererka waqtiga qaboojinta. Geedi socodka ama kaabashada walaaca fekerka waxaa loo isticmaalaa in lagu diido waxyeelada shaqada qabow; taas oo ah, in la jilco oo la kordhiyo ductility-ka birta daciifka adag. Walwalka gudaha ayaa laga yaabaa inay ka dhalato geedi socodka isu sooca caaga sida mashiinka ama shiidiin, isku-qab qabsiga labbiska ee alxanka ama nidaamka kabka, ama isbedelka wejiga. Kala go 'iyo dagaal ayaa dhici kara haddii culeyska gudaha aan laga saarin. Annealing wuxuu baabi'in doonaa walaacyadaan markii qeybta lagu kululeeyo heerkulka lagu taliyay, halkaas lagu hayo muddo ku filan, oo si tartiib ah loogu qaboojiyo heerkulka qolka.
Maxaad u isticmaashaa annealing?
Kuleylka kuleylka ee casriga ah wuxuu bixiyaa faa'iidooyin badan hababka kale ee kuleylka waxaana badanaa loo isticmaalaa codsiyada lifaaqa. Kuleylka iyada oo loo marayo indha-indheynta waxay bixisaa kalsooni, soo noqnoqosho, xiriir la'aan iyo kuleyl kuleyl tamar leh waqti ugu yar. Nidaamyada adag ee gobolka ayaa awood u leh inay kuleyliyaan aagag aad u yar oo ku jira dulqaadka wax soo saarka saxda ah, iyada oo aan la carqaladeynin astaamaha shaqsiyadeed ee metallikada. Soo-saarista waxaa loo isticmaali karaa dusha sare ama kuleylka; dacwadeynta kiisku waa macquul iyadoo kuxiran waqtiga, heerkulka iyo astaamaha maaddada.
Cilmiga hawada soojiidashada waa kalmad guud oo loo jeedo kuleylka birta ilaa heerkulka la cayimay ka dibna qaboojinta heer ay soo saari doonto microstructure la safeeyey. Isticmaalka Induction, birta si dhakhso ah ayaa loogu kululayn karaa heerkulka marka la xakameynayo wareegyada soo noqnoqda iyada oo aan lala xiriirin bartilmaameedka birta ama kuleylinta jawiga jawiga ku xeeran. Hilibyada qaboojinta ee loogu talagalay biraha firfircoon badanaa waxay ku jiraan hawo furan taas oo ka dhalata samaynta luqadda. Birta-bilaa-dabiiciga ah, naxaas ama naxaas oo kale ah, waxaa lagu xakamayn karaa qaboojin deg-deg ah iyada oo biyo lagu qubo. Natiijooyinka ayaa “jilcaya” maaddada oo ka dhigaya mid si fudud loo qaabeeyay qaab loo baahan yahay.
Qaboojinta Afduubka waxaa badanaa loo isticmaalaa sameynta siligga, sameynta aaladda saxda, iyo codsiyada sameynta tuubbo. Waxyaabaha caadiga ah ee ka-hortaga gubashada waxaa ka mid ah aluminium, steel carbon, iyo carbide. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka ka soo tebinta indha indheeynta ayaa ah: awood ku saleysan baahida; wareegyada kuleylka degdega ah; ciribtirka quwadda joogtada ah aagga kuleylka ballaaran (sida foornada); kaydinta kharashka oo ay ugu wacan tahay adeegsiga oo hoos u dhacay; kululaynta tooska ah ee birta oo aan ahayn hawada khaldan sida howlaha socodka; hanaan aamin ah oo ka badan qaababka ololka furan; hagaajinta nidaamka xakameynta xitaa kuleylka iyo kuleylka labiska heer kul ah oo aan ku xirneyn xirfadaha wadaha.
Maxaad u dooratay inlaction HLQ ee durdurinta hurdada?
Annagu waxaan nahay hoggaamiyeyaasha warshadaha ee kuleylka kuleylka la leh xafiisyada Shiinaha.
Qaboojinta xaraashka waa nooc ka mid ah daaweynta kuleylka iyadoo la adeegsanayo kuleyliyaha, kuleyl bir illaa heerkul cayiman ka dibna qaboojinta heer ay soo saari doonto microstructure la safeeyey. Adeegsiga kuleylka Induction, birta si dhakhso ah ayaa loogu kululayn karaa heerkulka marka la xakameynayo wareegyada soo noqnoqda iyada oo aan lala xiriirin bartilmaameedka birta, sheyga badanaa lagu qaboojiyaa hawada furan. Natiijooyinka ayaa “jilcaya” maaddada oo ka dhigaya mid si fudud loo qaabeeyay qaab loo baahan yahay.
Faa'iidada ku baraarugida kuleylka kuleylka:
1. Heerarka wax soo saarka sare
2. Aagga kululaynta oo aan badnayn iyo baahi baahsan oo aan lahayn (sida foornada)
3. Kaydso qiimaha sababta oo ah soosaarka oo kordhay iyo kharashyada shaqada oo yaraaday
4. Way fududahay in la xakameeyo waqtiga kuleylka iyo heerkulka
Sababtoo ah waxaan ku takhasusay kuleylka la-gelinta, macaamiisheenna waxay ka faa'iideystaan ​​xalalka isku-dhafka ah ee isku-dhafka ah ee warshadaha badan.
Macaamiisheenu waxay ka fogaadaan alaabada xad-dhaafka ah iyo qayb-ka-qaadashada iyadoo la adeegsanaayo adeegsiga annealing, kaas oo keena qashinka ugu yar iyo natiijooyinka wanaajiyey qiime hoose.